News Collection: म ३५ बर्षिया विवाहित नारी हुँ। म २७ बर्षिया युवकसँगको मायामा पनि डुबेकी छु। म अन्योलमा छु । के गरौँ ?
म ३५ बर्षिया विवाहित नारी हुँ। म २७ बर्षिया युवकसँगको मायामा पनि डुबेकी छु। म अन्योलमा छु । के गरौँ ?
म ३५ बर्षिया विवाहित नारी हुँ । मेरो १३ वर्षको छोरा पनि छ । मलाई एउटा कुराले बेला-बेलामा सताइरहन्छ । यतिबेला म केही कुरा नमिलेर श्रीमान्सँग अलग हुने सोचमा छु भने स्वयं म २७ बर्षिया युवकसँगको मायामा पनि डुबेकी छु । उक्त युवक त झन् मबिना मर्छु भन्छ । हामी एक-अर्काबिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । मलाई परिवार र समाजसँगको हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ कि भन्ने डर छ । हाम्रो जातभात पनि मिल्दैन । आफ्नो जीवन बिग्रन्छ कि भनेर उक्त युवक पनि चिन्ता गरिरहन्छ । म अन्योलमा छु । के गरौँ ?
समाजको बढ्दो भौतिक विकाससँगै परिवारको विखण्डन र विवाहेत्तर सम्बन्धहरू पनि बढ्दै गएका छन् । श्रीमान् र श्रीमतीबीचको सम्बन्ध टुंगिनु अब हाम्रो समाजका लागि पनि नौलो कुरा रहेन ।
त्यसैगरी रोजगारीका क्रममा श्रीमान्-श्रीमती एक-अर्कासँग टाढा हुनुपर्ने र सूचना प्रविधिको सहजताले यौन आकांक्षाहरूलाई समेत सम्बोधन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा विवाहेत्तर सम्बन्ध पनि ठूलो कुरा रहेन । विवाहेत्तर सम्बन्धले बिगारेको घर-परिवारका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूमा दिनहुँजसो आउने खबर त्यसकै संकेत हो । रह्यो तपाईंको कुरा, तपाईं के कारणले आफ्नो श्रीमान्सँग अलग हुने सोचमा हुनुहुन्छ ? भन्ने कुरा पत्रबाट खुल्दैन । आर्थिक अभाव वा यौन असक्षमताका कारण श्रीमान्बाट अलग हुन लाग्नुभएको हो भने त्यो तपाइर्ंको निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो । होइन, आर्थिक वा यौन असक्षमता भन्दा पर तपाईं ती युवकको आकर्षणमा रह्नुभएको हो र त्यसै कारणले श्रीमान्बाट अलग हुने चाहना देखाउनुभएको हो भने तपाइर्ं गलत हुनुहुन्छ । किनभने, तपाईंका अगाडि तपाईंको मात्र होइन, तपाईको छोराको पनि भविष्य छ । १३ वषर्ीय छोराले बाबुआमा अलग भएको कुरा सजिलै पचाउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसमाथि श्रीमान्सँग पारपाचुके लिएपछि उक्त युवकले तपाइर्ंलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्छ भन्ने स्थिति पनि म देख्दिनँ । किनभने कतिपय अवस्थामा त्यस्ता युवक फूलको रस चुस्ने भमरामा परिणत हुने गरेका छन् । तपाईंको श्रीमान्लाई तपाईंको वर्तमान सम्बन्धका बारेमा जानकारी छैन भने ती युवकको मोहलाई त्याग्नुमै तपाईं र तपाईंको परिवारको कल्याण छ ।